Siddeed waxyaabood oo laga bartay kulankii Bournemouth iyo Man City… (Muxuu ka dhignaa goolkii Aguero?) – Gool FM
>- Manchester City ayaa dhalisay saddex gool iyo wax ka badan Premier League markii ugu horreysay iyadoo ku ciyaaraysa meel ka baxsan garoonkeeda tan iyo bishii Agoosto markaasoo ay la ciyaarayeen West Brom.
>- Man City ayaan laga adkaan 17 kulan oo ay wajaheen kooxaha qeybta hoose kaga jira kala sarreynta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
>- Sergio Aguero ayaa noqday ciyaaryahanka labaad ee goolasha ugu badan ka dhaliyey Premier League sanadkan 2016, waxaana uu sanadkan dhaliyey 10 gool, kaliya waxaa ka sarreeya Harry Kane oo 11 gool dhaliyey.
>- Aguero ayaa gool ka dhaliyey koox kasta oo hadda ku jirta Premier League, waana ciyaaryahankii ugu horreeyey ee abid sidaan sameeya.
>- Sergio Aguero ayaa dhaliyey 9 gool 10-kii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ka soo muuqday Premier League.
>- Bournemouth ayaan marnaba gool uga dhalin garoonkeeda kooxda Man City afar jeer oo ay la ciyaartay xilli ciyaareedkan.
>- Man City ayaa gooldarro la’aan ah isku dar siddeed kulan oo ay Bournemouth la ciyaareen horyaalka, 6 waa ay ka adkaadeen labo jeerna barbaro ayey la galeen.
>- Kevin De Bruyne ayaa toos ugu lug lahaa 15 gool 20 kulan oo uu Premier League u ciyaaray kooxda Man City xilli ciyaareedkan.